Warmurtiyeed ka soo baxay oday dhaqameedyada iyo waxgaradka Beesha shanaad
Warmurtiyeed ka soo baxay oday dhaqameedyada iyo waxgaradka Beesha shanaad Mogadishu Talaado 10 July 2012 SMC
· Inaan laga hor iman soo jeedinta Dasturka, loona gudbiyo Ergooyinka si ay u ansixiyaan
· Inaan soo gudbinno xubno tayo aqooneed iyo waaya aragnimo leh oo ka mid noqda Baarlamaanka marxaladdan cusub la kowsanaya.
· In, si aan loogu xad gudbin xuquuqdayada, Beesha Shanaad loo qoondeeyo qaab ay ku hesho xuquuqdeeda laguna caddeeyo Dastuurka hadda la qorayo. Haddii aan sidaas la yeelinna, Siyaasad Beesha Shanaad ka qayb qaadato waxaa ugu dambaynaysa muddada uu shaqaynayo Dastuurka Kumeel gaarka ah. Taasina waxay meel ka dhac ku tahay xuquuqdayada baniaadamnimo.
· In Beesha Shanaad loo sameeyo barnaamij cawil celin ah si wax looga saxo caddaalad darradii muddada dheer lagu samaynayey gaar ahaan tan iyo intii aan xorriyadda aan qaadannay il gaar ahna lagu eego dhinacyada waxbarashada iyo shaqooyinka Dawladda.